शिक्षामा सिण्डिकेट - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७५ भदौ १२ गते ४:४६
शैक्षिक माफियाहरु शिक्षामा सिण्डिकेट लगाएर मनग्य पैसा धुतिरहेका छन्, सरकार रमिते बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, सरकार पनि उनीहरुसँगको कमिसनमा रमाएको छ । अझै भनौँ, सरकारलाई ती भ्रष्टहरुले खरिद गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरु विद्यालयको लोगो अंकित कपी छापेर, लोगो अंकित सर्ट, टाई र ट्रयाकसूट बेचेर, कोट र ज्याकेट बेचेर पैसा असुल्दैछन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो आशंक उत्पन्न हुन्छ कि यी माफियाहरुले सरकारलाई पनि कमिसन दिएका छन् र त सरकार चुपचाप छ । सरकारको कुन मन्त्री कस्तो छ र कसरी आम जनताका पक्षमा काम गरिहरको छ ? जनताले मूल्यांकन पनि गरिहेका छन् ।कार समक्ष प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने, र अनुभूति गर्ने खालको शासन चाहियो भन्दै यो देशमा सरकारको स्थायीत्वको माग वषौँदेखि गर्दे आएका हुन् । बल्ल जनताले सरकारको स्थायीत्व होला कि भन्ने झिनो आशा गर्न थालेका छन् । सरकारको स्थायीत्वसँगै जनताले नीजि विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रबृत्ति लागू भएको हेर्न चाहेका छन् ।
नीजि विद्यालयहरुले लोगो अंकित कपी छापेर ठगी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ लाइब्रेरीको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनैपनि शीर्षक यी शैक्षिक माफियाहरुले कुनै पनि कक्षामा लिन बाँकि राखेका छैनन् । माफियाहरुको सञ्जाल देशैभर बिस्तारित, सक्रिय अनि संगठित छ ठग्नका खातिर ! यसमा १०० प्रतिशत नै उस्तै त छैनन् तर बाहुल्यता भने ठगहरुकै छ, सेवामुखि निकै कम छन्, अल्पसंख्यक ।
त्यसैले अब सरकारले ती शैक्षिक माफियाहरुको बैँक खाता रोक्का गरी उनीहरुको हरेक सिण्डिकेट नतोडे सम्म यो क्षेत्रको विकास हँुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले ती माफियाहरुको पहिचान गरी कार्वाही गर्न ढिला गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल अझै उच्चो हुँदै जान्छ र जनता मारमा पर्दै जनेछन् । यो देशमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको स्वाद गरिव र निमुखा जनतालले भन्दा पनि त्यस्तै माफियाहरुले मात्र लिइरहेका छन् । सरकार दृढ भएर आम शोषित, पिडित र दुःिख जनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्दै जाऊ जनता हमेशा साथ दिन तयार छन् ।